Apple Inozivisa Vanokunda veSwift Student Dambudziko | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | Noticias, WWDC 2021
Apple ingori vhiki pasara pakurova chimwe chezviitiko zvakakosha zvegore: iyo WWDC 2021. Ichi chiitiko chinounza pamwechete zviuru zvevagadziri vane basa rekupa hupenyu kuApp Store nemaapplication ayo anochengetedza hupenyu hwedu kune akawanda mabasa zuva rese. Apple yagara ichida kupa mubairo mudiki wesangano nekuvapa kuti vapinde muchiitiko ichi mahara. Nekudaro, kuburikidza nechiitiko chaicho mukana wekupinda mahara watovepo. Kunyange zvakadaro, ivo vanokunda ve Swift Mudzidzi Challange vakatsanangurwa iyo inopa mubayiro ava vadiki vanogadzira vakatenderedza Apple.
Swift Mudzidzi Challange: mazana matatu Vanokunda vane Mahara egore Nhengo
Pakati peboka iri pane vakadzi vechidiki vatatu vasiri kungoshandisa tekinoroji kugadzirisa chaicho-matambudziko epasirese, asi vari kushingairirawo kudzidzisa chizvarwa chinotevera kuita zvakafanana. Panguva imwe chete ivo vari kubatidza yavo yega nzira vachiona kuti vamwe vane maturusi ekuti vatevere mumakwara avo, vese vasati vapedza chikoro chesekondari.
El Swift Mudzidzi Challange ndiwo makwikwi ayo Apple anopemberera gore rega pamberi peWWDC. Chinangwa ndechekutsvaga nekupa mubairo tarenda kutenderedza kodhi yekuvandudza kutenderera pasirese. Vatori vechikamu vanofanirwa kuve vanopfuura makore gumi nematanhatu muEuropean Union kana vanopfuura gumi nematatu muUnited States. Kuti vatore chikamu, ivo vanofanirwa kutumira ruzivo nezve ivo, vanosangana nhevedzano yezvinodiwa nezve kudzidziswa kwavo mumasangano ane chekuita neEMEM zvirongwa kana masangano akasimbiswa neApple. Pamusoro pekuburitsa chirongwa mu Swift Playground izvo zvinogona kuyedzwa mune isingasviki maminetsi matatu.
Aya ndiwo maitiro ekuvandudza Apple maforamu ehurukuro eWWDC 2021
Maawa mashoma apfuura kuburitswa kwakaburitswa kuchizivisa danho redare redzimhosva re Swift Student Challange. Nekudaro, hapana runyorwa rwepamutemo nevanosvika mazana matatu evakundi kubva kunosvika makumi matatu nemashanu nyika. Kunyangwe izvi, Apple yaida kuratidza vakadzi vatatu vasina kungoshandisa tekinoroji kugadzirisa dambudziko munyika chaimo. Asi ivo vanotora chikamu nekushinga munharaunda. Izvi zvakasimbiswa mune Dhinda rekuburitsa:
Panguva imwe chete ivo vari kubatidza yavo yega nzira vachiona kuti vamwe vane maturusi ekuti vatevere mumakwara avo, vese vasati vapedza chikoro chesekondari.
Vanokunda vanowana Rimwe gore kunyoreswa mahara kuApple Developer Chirongwa. Kana ivo vasiri vezera repamutemo, pavanosvika zera reruzhinji, ivo vanozokwanisa kubata iro hombe apuro kudzikinura mubairo wavo. Chii chimwe, ivo vanozogamuchira bhachi uye seti yemapini Yakasarudzika kune iyi WWDC 2021 iyo inotanga inotevera June 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Inozivisa Vanokunda ve Swift Mudzidzi Dambudziko
Iyi yaizove iyo iPhone 13 zvinoenderana nekudonha kwemafaira eCAD